Xog: ROOBLE oo ku baaqay kulan JAWAAB u ah kii uu FARMAAJO qabtay shalay - Caasimada Online
Home Warar Xog: ROOBLE oo ku baaqay kulan JAWAAB u ah kii uu FARMAAJO...
Xog: ROOBLE oo ku baaqay kulan JAWAAB u ah kii uu FARMAAJO qabtay shalay
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan isugu yeeray taliyayaasha ciidamada amniga dalka, maalin kadib markii ay la kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in Rooble uu xalay farriin u diray dhammaan taliyayaasha uguna baaqay inay isugu yimaadaan kulan maanta ka dhacaya xafiiska.
Farmaajo oo shalay kulan la qaatay Guddoonka Gobolka Banaadir, Taliyeyaasha Ciidamada Xoogga Dalka, Booliska, Asluubta iyo Nabad Sugidda ayaa faray adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda.
Kadib kulankaas ayaa waxaa taageerayaasha Rooble ay niyadjab ka muujiyeen in awoodda amniga dalka uusan gacan ugu jirin oo taliyayaasha ay si buuxda ugu xiran yihiin ugana amar qaataan Farmaajo.
Rooble ayaa lagu eedeeyaa inuu siyaasad ahaan yahay nin aan aragti fog laheyn balse mar kasta go’aanadiisa ay ku saleysan yihiin falcelin.
Dadka siyaasadda taxliiliya ayaa rumeysan in Rooble ay aheyd inuu isugu yeero taliyayaasha ciidamada amniga, oo oo uu kala hadlo weerarkii garoonka Aadan Cadde iyo qaraxyadii Beledweyne iyo in amniga dalka la adkeeyo, balse aysan aheyn inuu taas kusoo baraarugo markii uu Farmaajo qaaday tallaabo noocaas ah.